စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု
1 စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု on 7th March 2010, 2:17 am
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မ၀င်ဖြစ်တာ ကြာနေပါပြီ .. အခု တော့ ဟိုမွှေဒီမွှေ လုပ်ရင်းနဲ့ စာအုပ် တွေ ဖတ်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Websites ကလေးတွေ တွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့ မျှလိုက်ပါတယ်.. မြန်မာ ဆိုဒ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် တချို့ ဆိုဒ်တွေ ထဲမှာ မြန်မာလိုစာအုပ်တွေ Upload တင်ထားတာတွေ ရှိတော့ မြန်မာ စာအုပ်ပါ ရှာလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်.. သူ့အထဲမှာညွှန်းထားတာတော့ အကောင်းဆုံး Websites အခု ( ၁၈ ) လို့ပြောတာပဲ ...နဂို မူရင်းရေးထားတဲ့သူကတော့ အခု ၂၀ ပါ.. ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အထဲက တချို့ ဆိုဒ်တွေကမရှိတော့လို့ ကျန်တာကလေးကိုပဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ် .. Free Ebook Download ပါ .. Free နော် Free .. ကျွန်တော်တို့ တွေက Free ဆိုမှ စိတ်ဝင်စား ကြလို့ ကြေငြာပေးတာပါ...အဲဒီ့ ၁၈ ခုကတော့ အောက်မှာနော်... လိုလို မယ်မယ် ပေါ့ .. ကူးပြီးတော့ Save ရင် Save ထားလိုက်ပါ...
အဲဒီ့ဆိုဒ်မှာ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၉၆ ခု ရှိပြီးတော့ Free down လို့ရတဲ့ စာအုပ်ပေါင်း ၄ ထောင်ကျော်ရှိပါတယ် ...
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ Online magazine တွေ အပြင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာ ၊ စာအုပ်အမည်တွေကိုပါ ရေးပြီးတော့ ရှာနိုင်ပါတယ် ..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်ပေါင်း ၂၁၂၈၂ ကျော်ရှိပါတယ်.. ကိုယ့်ရဲ့ PDA ၊ IPod ၊ Ebook Reader တွေနဲ့ပါ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်အားလုံးနီးပါး ကို Free Download ရနိုင်ပါတယ် ..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ပါတ်သတ်တာ ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် အထူး သင့်လျော်တဲ့ ဆိုဒ် တစ်ခုပါ.. ခေါင်းစဉ်ခွဲပေါင်း ၁၅၀ ရှိပါတယ် ... ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာစာအုပ်တော်တော်များများ ကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ပါတ်သတ်တာတွေ ၊ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းတွေ ၊ ပရိုဂရမ်ပိုင်းတွေ ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် အထူး သင့်လျော်တဲ့ ဆိုဒ် တစ်ခုပါ..
ဒီဆိုဒ်မှာကလေးကိုတော့ တော်တော်များများ ရင်းနှီးမှာပါ ... မြန်မာလိုစာအုပ်တွေကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် .. ဒါအပြင့် အဲဒီ့ ဆိုဒ်မှာ ကိုယ်ဖော်ပြချင်တဲ့ စာအုပ်ကို Upload တင် ပြီးရင် ကိုယ့် ရဲ့ Blog ပေါ်မှာ I-Paper နဲ့ ဖော်ပြနိုင်အောင် ခွင့်ပြုထားပါတယ် ...
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ Ebook တွေ အပြင် Video Training တွေ ကိုပါ ရယူနိုင်ပါတယ် ။။
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ က စာအုပ်တွေကို ရယူနိုင်ပါတယ် ။ တော်တော် များပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွေ ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ တခြား ဘက်တွေ ကစာအုပ်တွေကိုရော ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒီဆိုဒ်ကလည်း အပေါ်က ဆိုဒ်လိုပါပဲ ။ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ က စာအုပ်တွေကို ရယူနိုင်ပါတယ် ။
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေကို ရရှိုနိုင်ပါတယ်..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ ကွန်ပျူတာ ပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေကို ရရှိုနိုင်ပါတယ်..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်တွေ အပြင် Software တွေကိုပါ ရရှိုနိုင်ပါတယ်.. Software တွေကိုတော့ Free မရနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ် ..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်ပေါင်း ၈ သိန်းကျော်ရှိပါတယ် ..Video တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်ပေါင်း ၃၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ် .. စာရေးဆရာ နာမည် စီးရီးနဲ့တောင် ရှာနိုင်ပါတယ် ...
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာနာမည် ဘာကြိုက်လဲ ရှိတ်စပီးယား ကြိုက်တာလား ရပါတယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ..
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ပါ .. Science နဲ့စာအုပ်တွေကိုပါ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ...
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်တွေကို သူကဏ္ဍကလေးတွေ နဲ့သူ ခွဲပြီးတော့ ရှာနိုင်ဖွေနိုင်ပါတယ်..
စာအုပ်တွေကို တော့ Online မှာ တခြားနေရာက ဆိုဒ်တွေမှာလည်း ရှာနိုင်ပါတယ် ...ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း အဲဒီ့ ဆိုဒ်ကလေးကနေတွေ့လို့ သဘော ကျလို့ ပြန်လည် မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် ... ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ ရှာတဲ့ အခါမှာ အကူအညီ ပြုမယ်ထင်ပါတယ် .. အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက် ...
REF : [You must be registered and logged in to see this link.]
2 Re: စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု on 7th March 2010, 11:35 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 13
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 23
Thank you Thank you ! :wink
3 Re: စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု on 8th March 2010, 7:48 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 1369
တညျနရော : မြိတ်မြို.
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-09-25
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 2313
ကောင်း ပါ့ ဗျား။ ဒီလို site တွေ စု ပြီး တင် ပေး တဲ့အတွက် တနေရာ ထဲ မှာ သိ တဲ့ အတွက် ကောင်း ပါ့ ။
ကျနော် လည်း medical ebook , အ ခြား သော ebook တွေ free ရ တဲ့ site လေး ပြော ပြမယ် ။
free register လို ပါတယ်
4 Re: စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု on 14th March 2010, 6:43 pm
Registry အကြောင်းကို မြန်မာလိုရေးထားတာလေးရှိရင်ပေးပါဦး
5 Re: စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု on 16th July 2010, 4:00 am
ko htet wrote: Registry အကြောင်းကို မြန်မာလိုရေးထားတာလေးရှိရင်ပေးပါဦး
အကိုရေ Registry ကို မြန်မာလို့ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ က တော်တော် ကိုရှားပါတယ်
မရှိသေးသလောက်ပဲ ..........အဲတာကြောင့် ညီလေးပြောချင်တာကတော့ Registry ပိုင်းကို
လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ နားလည်နိင်အောင် လုပ်ပြထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးကိုပဲ ပေးလိုက်တော့မယ်နော် အကို
အောက်က လင့်လေးမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ
6 Re: စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု on 16th July 2010, 7:20 pm
ကိုနေဦးသစ်ရေ လင့်တွေကို ကုဒ်ခံပြီး ရေးပေးပါ ခင်ဗျာ
7 Re: စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု on 16th July 2010, 7:52 pm
ဟုတ် အကိုရေ Sorry ပါ ဗျာ ညီလေး မေ့သွားလို့ပါ အကို ET ရေ
8 Re: စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု on 14th May 2011, 10:34 pm
ဒီနေ့ Connection လေးလည်းကောင်း၊ ကိုယ့် site status လေးလည်း သိချင်တာနဲ့ Google Analytic ကနေ ၀င်ကြည့်တော့ ဒီ Topic က အတော်လေးဟော့နေလို့၊ ခုမှဝင်ကြည့်မိတယ်..
ဒီထဲမှာ မပါသေးတဲ့ မြန်မာစာအုပ်ဆိုဒ်တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
[You must be registered and logged in to see this link.] ဖြစ်ပါတယ်... သိပြီးတဲ့သူလည်း သိပြီးပါလိမ့်မယ်..
လောလောဆယ်တော့ v3 အတွက် ပြင်ဆင်နေလို့ ခဏပိတ်ထားပါတယ်...
(ဒီတော့ပစ်က အတော်ဟော့ဗျာ.. Google မှာ စာအုပ်ဆိုပြီးရှာရင် ဒီကောင်ထိပ်ဘဲ)
9 Re: စာအုပ် အခမဲ့ ယူနိုင်မယ့် Best Sites ၁၈ ခု